Ankehitriny anefa dia mitaraina ny ankamaroan'ny klioba izay mikasa handray anjara amin'izy ity satria dia lasa midangana be ny saram-pisoratana anarana. Araka ny angom-baovao teo anivon'ny FMF dia hakarina . ho 1.000.000 ar io saram-pisoratana fandrasana anjara io raha 200.000 ar teo aloha;. Ny antony dia ny hiakaran'ny haavo teknikan’ireo mpandray anjara satria tsapan’ny teo anivon'ny FMF fa saika manadrankandrana mandray anjara amin'ny fifaninanana avokoa ireo klioba kely izay eny anivon'ny fokontany eny. Izay ekipa vonona tena hiady marina, araka izany, no kajiana handray anjara. Misy koa anefa ireo mpitantana klioba vaventy no mitaraina satria dia saika nikasa handahatra klioba roa kenefa mavesatra ny handoa 2.000.000 ar nefa ny fandehanana hiatrika ny fifaninanana etsy an-daniny, Efa lasa mitovy izany izao ny sanda haloan’ny klioba miatrika ny fifaninanana Pro league sy ny Telma coupe de Madagascar saingy iry voalohany dia haverina ny antsasany raha tsy mitsoaka an-daharana fa mamita ny lalao rehetra hatramin’ny farany ilay klioba.